Amagcisa akhalaza kwi-Apple malunga ne-Orange Circle kwi-Menu Bar kwi-macOS Monterey | Ndisuka kuMac
Abaculi bakhalaza kwi-Apple malunga nesangqa se-orange kwibar yemenyu kwi-macOS Monterey
Ngenxa yokuba sihlala sithetha nge-Apple kunye nokuthembeka kwayo, akuthethi ukuba amaxesha ngamaxesha kuvela iingxaki ezithile ezibeka abo bazisebenzisayo engxakini. Nangona kunjalo, kufuneka kuqatshelwe isantya, phantse rhoqo, iinjineli ze-Apple ekufumaneni isisombululo kwingxaki okanye iingxaki ezinokuvela. Kwakhona kunengqiqo ukuba ezi ngxaki zivela kwiinguqulelo zanamhlanje kwaye kule meko iye yavela kuyo IMacOS Monterey. Akukho nto ingaphezulu kwaye akukho nto ingaphantsi isangqa esiorenji siyavela kwibar yemenyu ukwenza izinto zibenzima ngakumbi kubasebenzisi bayo.
Eso sangqa esiorenji okanye ichaphaza eliorenji lelo livela xa usebenzisa imakrofoni, okwenzekayo kukuba xa ivuliwe kubonakala ngathi ingxabano iyavela kwaye eso sangqa senza impazamo kwibar yemenyu eshiya iMac ingasetyenziswa ngexesha leziganeko.
I-Apple yongeze umboniso obonakalayo olumkisa abasebenzisi kuso nasiphi na isicelo okanye isixhobo esifikelela kumakrofoni okanye ikhamera: i-orenji okanye ichaphaza eliluhlaza kwibar yemenyu. Eli nqaku lokhuseleko lijonge ukutsala ingqalelo yabasebenzisi ekufikeleleni ngokungazi, kodwa iphunyezwe ngendlela eyonakalisa amagcisa abonakalayo.
Xa usebenzisa imayikrofoni, loo ndawo ibonakala kwibha yemenyu kuyo yonke idispleyi eqhagamshelweyo. Oku kwenzeka naxa ibar yemenyu ivaliwe kubabonisi bangaphandle, ngaphandle kokuba ichaphaza libonakala lidada esithubeni kwikona ephezulu ngasekunene. Amagcisa akhalaza kuba xa esebenzisa izikrini ezinkulu zangaphandle kwigumbi elizele luluntu, elo nqaku liba sisiphazamiso kunye nenkathazo ye-audiovisual.
Abaculi baye baqhagamshelana ne-Apple ukuze babone indlela yokulungisa ingxaki. Enye yeengcamango ezinikezelweyo kukuba baphumeze uhlobo oluthile lwesisombululo ukwenzela ukuba esi sangqa sipheliswe kwezi ntlobo zezikrini. sele ikhona isisombululo sexeshana, ekwabelwana ngayo ngu "s4y" kwiGithub. «Le app izakususa ichaphaza eliorenji. Ayivunywanga ngokusemthethweni yi-Apple kwaye inokukhutshazwa ngalo naliphi na ixesha ngohlaziyo lweMacOS lwexesha elizayo. Kukho into kwaye ngelixa silindele impendulo ye-Apple, ingcono kunanto, kunjalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Abaculi bakhalaza kwi-Apple malunga nesangqa se-orange kwibar yemenyu kwi-macOS Monterey
Sele kukho iimeko ezininzi zokuzama ubuntlola ngeAirTags